Call for Applications - Constitution Academy 2020 May | ConstitutionNet
Call for Applications - Constitution Academy 2020 May
Call for Applications to our Constitution Academy (May 2020) is now open!
Myanmar Constitution Academy isanine-day intensive course which provides participants an introduction to the key principles and core approaches on processes of constitutional design. May 2020 Constitution Academy will be the fourth Academy offered by the MyConstitution Programme. The academy aims for participants to learn from leading international and local Myanmar experts in the fields of comparative constitutional law, and the history and development of constitutional law in Myanmar. The course focuses on the role of constitution-building in conflict settings, and in diverse or multi-ethnic countries, and the relevance of constitutional processes in managing such conflict.
Are youaMyanmar professional interested in constitution building? Do you wish to share your learning to promote constitutional culture in Myanmar? Apply now through the documents below!
Place: Pyin Oo Lwin
Duration: 25 May -2June 2020
Applications must be submitted via the link http://bit.ly/2SCLL5A (OR) via email to my.constitution@idea.int .
Applications must contain Curriculum Vitae and Completed Application Form.
Applications can be submitted in either English or Myanmar (English is preferred but not necessary)
Applications must be submitted by 15th March 2020.
Note: Applicants must be able to commit to participate for the full9days.
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသင်တန်း ၂၀၂၀ မေလအတွက် သင်တန်းသား/သူများ ခေါ်ယူနေပါပြီ ! ! !
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ သင်တန်းသည် (၉) ရက်တာ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်မည့် သင်တန်းသား/ သူ များကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပုံစံဒီဇိုင်း၏ အရေးပါသော အခြေခံမူများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ မေလ ၂၀၂၀ တွင် ကျင်းပမည့် သင်တန်းသည် MyConstitution အစီအစဥ်မှ ဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်သော စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် သင်တန်း ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသား/သူများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အပြင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ ပေါ်ပေါက်လာမှု သမိုင်းကြောင်းစသည်တို့ကို နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များထံမှ သင်ယူလေ့လာနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းတွင် မတူကွဲပြားပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်သော နိုင်ငံများနှင့် ပဋိပက္ခများဖြေရှင်းရေး အခင်းအကျင်းတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ယင်းကဲ့သို့သော ပဋိပက္ခများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ဆီလျော်နိုင်မည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ အစရှိသည်တို့ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးပို့ချသွားမည် ဖြစ်သည်။
သင်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာနိုင်ငံသား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသလား? သင်၏ လေ့လာသိရှိသော ပညာရပ် ဗဟုသုတများကို မျှဝေခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ယဥ်ကျေးမှုကို တိုးတက်မြင့်မား စေလိုပါသလား? ယခုပင် လျှောက်ထားလိုက်ပါ !
အချိန်- မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ထိ ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
လျှောက်လွှာကို နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရမည့် ရက်- မတ်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
လျှောက်လွှာများကို http://bit.ly/2SCLL5A တွင် ဝင်ဖြည့်၍သော်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) my.constitution@idea.int သို့ အီးမေးလ် ပေးပို့၍သော်လည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ရေး အလုပ်အကိုင် အချက်အလက် (CV) နှင့် ဖြည့်သွင်းပြီး လျှောက်လွှာပုံစံ တို့ နှစ်မျိုးလုံးကို တစ်ပါတည်း ပေးပို့ရမည်။
လျှောက်လွှာပုံစံကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သို့ မြန်မာဘာသာ တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဖြည့်သွင်း ပေးပို့နိုင်သည်။(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့် ပေးပို့ပါက ပို၍ အထောက်အကူ ဖြစ်သော်လည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်ချက် မဟုတ်ပါ။)
လျှောက်လွှာများကို မတ်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နောက်ဆုံးထားကာ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။
မှတ်ချက်- လျှောက်ထား ရွေးချယ်ခံရသော သင်တန်းသား/သူများသည် သင်တန်း (၉) ရက်အပြည့် တက်ရောက်နိုင်ရမည်။
Application Form in English and Myanmar Language92.03 KB
Call for Applications in English and Myanmar Language698.71 KB